Waa maxay sababta aadan ugu adeegsan Safari Windows -ka | Madasha Mobile
Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso inaad beddesho biraawsarkaaga ama xitaa waxaad iibsatay kombiyuutar shaqsiyeed cusub shalay oo aad rabto inaad rakibto biraawsar. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo mar uun ayaad ka fikirtay Waa sidee Safari daaqadaha? Hagaag, maqaalkani wuxuu fikirkaaga ka saari doonaa madaxaaga. Dhowr sano ka hor waxay ahayd ikhtiyaar sida kuwa kale laakiin maanta waa inaad gabi ahaanba iska tuurtaa. Laakiin ha welwelin maxaa yeelay waxay noqon doontaa ikhtiyaarrada marka loo eego daalacashada. Dhab ahaantii, maanta qof walba wuxuu dooranayaa daalacayaasha kale duwan ee Windows. Adigu keligaa ayaad go'aankaas ahaan lahayd oo sabab ayay leedahay.
Sida aan maanta kuu sheegno waxaa jira xulashooyin badan oo ka duwan kor ku xusan Safari ee Windows. Waxaad leedahay Google Chrome, Mozilla Firefox, iyo Opera. Dhab ahaantii, waxaan kaga hadalnay daalacashadan maqaallo kale waxaana Opera loo soo bandhigay ikhtiyaar aad u xiiso badan.
Waxa dhacaya ayaa ah inaad u malaynayso inaad tahay taageere Apple, oo aan fahanno, iyo in dhammaan alaabteeda ay adiga kuu fiican yihiin, xitaa waxaad dooneysaa biraawsarka Safari ee nidaamka hawlgalka Windows. Maxaa la yidhi, dhawr sano ka hor waxay ahayd doorasho aad u wanaagsan, laakiin maanta ma aha oo waxaan ku siin doonaa sababaha cutubyada soo socda.
1 Safari daaqadaha: maxaan ugu isticmaali waayay?
1.1 Safari on Windows ma yahay biraawsarka ugu dhaqsaha badan?
1.2 Ka waran waxa ku jira warbaahin badan? Ma jiraa Safari ka fiican?
Safari daaqadaha: maxaan ugu isticmaali waayay?
Sidii aan hore uga wada hadalnay, waqti aan sidaa u fogeyn, Apple waxay u fidisay taageero biraawsarkeeda nidaamka hawlgalka Windows. Waxaa la dhihi karaa kuwa tufaaxa ah waxay soo mareen marxalad dhammaan alaabtoodu ay gaar u ahayd ka dibna waxay bilaabeen inay ku iibiyaan Microsoft iyo Windows iyo hadhow dhibaato kale haysato oo qaar badan oo iyaga ka mid ah uga tag Apple iyo iOS iyo MacOS.
Taasi waa meesha dhibaatada Safari ka soo gasho. Waa mid ka mid ah badeecooyinkaas oo Apple xaddiday marka la eego adeegsiga aaladaha dibadda leh tufaaxa gadaashiisa. Sidaa darteed biraawsarka ayaa hadda loo heli karaa oo keliya Mac, iPhone, iPad iyo iPod Touch.
Si aad u hesho fikradda qaladka aad samayn lahayd haddii aad go'aansato inaad ku rakibto daalacashadaan nidaamka hawlgalkaaga Windows: Noocii ugu dambeeyay ee Apple soo saartay Safari waa 5.1.7, kaas oo la sii daayay 2011 oo gabi ahaanba ma laha taageero, ama dayactir ama wax kasta sida ay ka yiraahdaan taageerada Apple ee aad booqan karto haddii aadan rumaysan. Taasi waa sax dadyowga, tufaaxa ayaa nagu guuldaraystay tan iyo 2011. Waxaan u malayneynaa inay yeelan doonaan xog ay ku ogaan lahaayeen in nooc kale oo biraawsar ah lagu isticmaalo daaqadaha iyo in horumarka iyo dayactirku uusan faa'iido u lahayn iyaga.
Linux vs Windows: faa'iidooyinka iyo khasaaraha nidaamka hawlgalka kasta
Sidaa darteed waxaad hore u haysataa sabab weyn oo ah inaadan ku rakibin Safari daaqadaha. Browserka Apple ma helin taageero ama cusboonaysiin tan iyo 2011. Tani waxay kuu noqon kartaa nacasnimo laakiin haddii aan ka hadleyno biraawsar maskaxda ku hay in aad halis gelin karto kombiyuutarkaaga gaarka ah.
Si aan u bilaabo, maxaa yeelay laga soo bilaabo 2011 ilaa 2021, oo ah marka aan qoreyno qoraalkan, kumanaan nuglaanta biraawsarka cusub ayaa la ogaan doonaa. Haddii Safari aysan helin cusbooneysiin, waxaad ilaalin doontaa PC -ga adigoo adeegsanaya Safari. Dabcan waxay durba sabab wanaagsan u tahay inaan la rakibin.
Waxyaalahan oo dhammu miyay kugu yar yihiin? Waa hagaag markaa waa inaad ogaataa taas horumarinta webka maanta waxba kuma laha tii sanado ka hor. Maxay tani ka dhigan tahay? Hagaag, sida ugu fudud haddii aad dhex marto bogag kala duwan oo ku jira HTML fudud waxay u badan tahay inaysan waxba dhicin oo aad u isticmaashid wax ka badan, laakiin haddii aad dhex marto mareegaha isticmaalaya noocyadii ugu dambeeyay ee CSS, Java iyo barnaamijyo luuqado kale oo badan oo maanta la isticmaalo aad uga badan sidii hore, uma shaqeeyaan adiga mana arki kartid iyaga.
Sidaa darteed ma aaminsani inaad rabto inaad aragto marka aad gasho degel kasta waad arki doontaa gebi ahaanba jabay ama aan la heli karin. Safari ma awoodi doonto inuu fasiro shaqooyinkaas mana jeclaan lahayd gabi ahaanba. Dhab ahaantii adiga oo aan taas ogayn waxaad u malaynaysaa in kombuyuutarku xun yahay ama ay jiraan wax la yaab leh oo dhacaya.
Safari on Windows ma yahay biraawsarka ugu dhaqsaha badan?
Dabcan maya. Annagu kaa yeeli mayno inaad mar dambe sugto inaad ka jawaabto su’aashan oo sanado badan lagu arkay internetka. Wax kasta oo kor looga hadlay Safari iyo Windows run ma aha. Maanta waxaa jira daalacanayaal aad uga dhakhso badan isticmaalayaasha nidaamka hawlgalka Windows. Sida tusaale ahaan Opera, Google Chrome ama Mozilla Firefox.
Annaga oo aan u gelin wax cayiman, hore ayaan taas kuugu sheegnay mid kasta oo ka mid ah saddexdaas ayaa ka fiican. Laakiin waa in maanta xitaa Explorer -kii hore laftiisu uu ka fiicnaan lahaa Safari, iyada oo aan la adeegsan nuqulkiisa cusub waxaan dhahnaa. Bal qiyaas waxaad rabto inaad ku rakibto kombuyuutarkaaga haddii aan hore u sii sahaminno Explorer.
Safari si fiican uma dhexgaleyso nidaamkaaga hawlgalka ee Windows. Waxay leedahay shilal badan marka lagu daro bookmarks, si joogto ah iskuday inaad u adeegsato barnaamijyada Apple isla rakibayaasha sidoo kale ma aha biraawsar aad nooga dhigaysa mid ammaan ah maadaama ay waligeed lahaan jirtay nuglaansho xagga amniga iyo burcad -badeedda ah. Waxaas oo dhan waxaan ula jeednaa xogta laga soo ururiyey qoraalkeedii ugu dambeeyay. Hadda ka feker sida ay noqon doonto in lagu rakibo nooca 2011 kumbuyuutarkaaga 2021.
Ka waran waxa ku jira warbaahin badan? Ma jiraa Safari ka fiican?
Waagii hore, biraawsarka Safari ayaa sidoo kale la rakibay maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo saarto waxyaabo badan oo bogga mareegaha ah oo daalacashada kale aysan oggolayn waqtigaas. Ahem, Internet Explorer. Laakiin waxay tahay in hadda tani aysan ahayn kiiska.
Haddii aad meel walba ka akhriday, boostadaas ama faalladaas waa in lagu taariikheeyaa 2000 -kii hoose maxaa yeelay sannadka 2021 -ka waad illoobi kartaa walaacan. Daalacayaasha hadda jira waxaad awoodi doontaa inaad ku daawato fiidiyaha, maqalka ama faylasha muuqaalka ee aad ka hesho internetka iyada oo aan wax dhibaato ah ka imaan biraawsar cusub. Dhammaan bogagga iyo bogagga shabakadda ee aad booqato waxay la qabsan doonaan baahiyaha daalacashada hadda jira Opera, Chrome ama Firefox.
Xaqiiqdii iyo sidii aan uga wada hadalnay maqaalka oo dhan, haddii aad isticmaasho Safari 2011 waxay ku siin doontaa dhibaatooyin aad u yar. Maanta qaabab kala duwan ayaa loo isticmaalaa sida vp9 ama ogg oo loogu talagalay fiidiyaha iyo maqalka bogga internetka. Qaababkan waxaa si fudud u soo saari kara daalacayaasha hadda jira, laakiin sida aad u soo dejisay oo u rakibtay nuqulkii ugu dambeeyay ee Safari, waxaad tixgelin kartaa dhammaan fiditaannadan inay dhinteen. Ma awoodi doontid inaad soo saarto nooc kasta oo ka kooban oo leh dhammaan fiditaannada hadda jira.
Sidaa darteed gunaanadku wuxuu yahay inaysan u qalmin haba yaraatee. Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso maqaalka aan kugula talineyno baaragaraafyada hore ee ku saabsan Opera iyo Chrome ee Windows. Halkaas ayaad ka heli doontaa guuleystaha biraawsarka runta ah iyo kan hadda jira. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobaylka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Safari » Waa maxay sababta aadan ugu adeegsan Safari daaqadaha